Iyintoni isitifiketi sekhompyutheni kwaye ndingayifumana njani?
Iziqinisekiso zekhompyutha zikhona ngenjongo enye: ukubonelela ngeakhawunti elandelelweyo yeetekethi ezithile zezakhono kunye / okanye ulwazi lomkhiqizo. Ukuba uyingcali, isatifikethi bubungqina bokuba. Ukuba awuyikho ingcali, indlela omele uyenze ukuba uqinisekiswe iya kunika izixhobo ukuba zibe nye.
Kukho iindlela ezininzi zokuqinisekisa kwaye isinyathelo sokuqala ukwenza uphando. Sebenzisa ixesha elichaza izakhono zakho zamanje, ugqibe apho ufuna ukuthatha khona umsebenzi wakho, kwaye ujonge iikopi ezisebenzisayo kwiinjongo zakho.
Kukho izixhobo ezininzi kule ndawo eza kukunceda uthathe isigqibo sokuba yintoni, ukuba kukho na, ukuqinisekiswa kukulungile kuwe.
Ngaba unomtsha kwi-IT (iTeknoloji yoLwazi)?
Eli nqaku liza kukunika ingqiqo malunga nendlela onokufumana ngayo unyawo lwakho emnyango wecandelo lokubuyisela i-IT.
Ngaba unayo isipiliyoni se-IT kodwa ungazi ukuba yiyiphi isitifiketi esiya kuhamba kuyo?
2004 Uvavanyo lwemivuzo
Fumana oko abantu abaneziko lokufumana isatifikethi.
Iincwadi zeNgcaciso zeeNcwadi kunye neSoftware
Fumana ukuba zeziphi iincwadi eziza kuhambelana neqondo lakho lamava kwaye yintoni isofthiwe yokuqeqesha izokunika ubuninzi bebuck yakho.
Ngaba udinga ukwazi okungakumbi malunga nokuqinisekiswa ngumthengisi othile?
Indlela efanelekileyo yokufumana le nkcazelo kusetyenziswa izixhumanisi ukuya kwesobunxele. Kodwa, ngenxa yokunyaniseka kwakho, nantsi ezinye zezixhobo ezidumileyo:
• Iinkonzo zeMicrosoft
• Izixhobo zeCompTIA
• Isiseko seZiseko zoQinisekiso
• Iziqinisekiso zeWebhu ne-Intanethi
Ngaba ufuna nje ukuhlola iimvavanyo?
Ewe, kukho ikhonkco yam kwiindawo eziphakamileyo ezibonelela ngeemvavanyo ezihlawulelwayo kunye neentlawulo-mali, zikho ezo zikhoyo kule ndawo (zikhululekile kwaye akukho kubhaliswa okufunekayo!), Okanye kukho izikhonkwane eziliqela kwisifundo ngasinye ( Cisco, iMicrosoft, CompTIA, njl.) Ngakwesobunxele.
Sebenzisa zonke ezi zinto ukufumana iimvavanyo eziqhelekileyo kwi-intanethi.
Zenza uvavanyo kwizinye iisayithi
Ngaba ufuna ukwazi izinto ezisiseko malunga nendlela yokubhalisa ukuhlolwa kunye nokufumana loo ngxelo ebalulekileyo?
Kukho indawo ezimbini ongabhalisa kuzo iimviwo ezininzi ze-IT. Iyokuqala yi-VUE kwaye yesibini yi-Prometric. Bobabini banika ubhaliso kwi-intanethi kunye neendawo ezininzi kwihlabathi. Unokukhangela isikhungo sokuqeqesha esiseduze nawe kwaye ufumane yonke ingcaciso oyifunayo ukuba ubhalisele kwaye uthathe iimviwo zakho. Kwiimeko ezininzi, kuzakufuneka ungabonakali nto ngaphandle kwe-ID yomfanekiso. Ukuze uthole iinkcukacha ezithe nkcukacha malunga neenjongo zeemvavanyo, imida, kunye nenani lemibuzo, kufuneka uhambele iwebhusayithi ye-vendor. Unxibelelwano oluncedisayo:
Izitifiketi eziphezulu zeTealog Networking
Abazali kunye neMfundo
I-Beethoven ye-Eroica Symphony
IiNkcazo ezinkulu zeNkcubeko
Yazi iMithetho Yakho yoLwandle kunye neMithetho yokuTywala
Ukufakwa kwamakholeji eMiles
Indlela Yokuthetha Ukubuyela kwisiFrentshi
UAbhigali (Dane) Faulkner
I-Diprotic Acid Inkcazo
I-Short Run Run vs. Long Run kwi-Microeconomics